थाइल्याण्डका राजाले किन आफ्नै अंगरक्षकसँग विवाह गरे ? - Kanchanjangha Online
थाइल्याण्डका राजाले किन आफ्नै अंगरक्षकसँग विवाह गरे ?
कञ्चनजंघा अनलाईन १९ बैशाख २०७६, बिहीबार ०९:४० मा प्रकाशित ( २ साल अघि) १०३५ पाठक संख्या
थाइल्याण्ड । थाइल्याण्डका राजा महा वजिरालंगकर्नले बुधबार विवाह गरेका छन् । राजा वजिरालंगकर्णले उनकै सुरक्षामा खटिएकी एक महिलासँग विवाह गरेका हुन् । विवाहपछि उनलाई रानी सुथिडा नाम दिइएको छ । शनिबार राजा महा वजिरालंगकर्णको राज्याभिषेक हुँदैछ ।
यही समारोहलाई लिएर राजाले विवाह गरेको विश्वास गरिएको छ । बुधबार भएको विवाह समारोहबाट सबैजना अचम्ममा परेका छन् । विवाह समारोहको दृश्य थाई टेलिभिजनबाट बुधबार बेलुकामात्रै देखाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । ६६ वर्षीय राजा वजिरालंगकर्न थाइल्याण्डमा लोकप्रिय मानिदै आएका छन् ।
सन् २०१६ मा उनका पिता राजा भूमिवोल अदुल्यादेजको निधनपछि उनी राजा भएका हुन् । सन् २०१४ मा राजा वजिरालंगकर्नको अंगरक्षकको टिममा समावेश भएकी थिइन् । सुथिडा थाई एअरलाइनको पूर्व–फ्लाइट एटेन्डेन्ट हुन् । राजा वजिरालंगकर्नको यसअघि तीनजनासँग विवाह भएको थियो । तीनै जनासँग सम्बन्ध बिच्छेद पनि भैसकेको छ ।
एक प्लेब्वायले ६ जना गर्भवती महिलाहरुको सबैको पेटमा आफ्नो सन्तान रहेको दावी
गायक दिप तामाङको आधुनिक गीत ‘स्वार्थी रहेछ तिम्रो माया ’ (भिडियो सहित)
नेपाली कलाकार सिक्किमको चासोक तङनाममा
चीनले बनायो संसारकै सबैभन्दा लामो समुद्री पुल
मस्कोमा ‘रोबोट वेश्यालय’ यस्ता-यस्ता काममा खप्पिस छन् यी खेलौना
पञ्जाबमा रेल दुर्घटना हुदा ५० को मृत्यु